Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo ka qaybgalay Shirweynaha garabka dhalinyarada Xisbiga Kulmiye oo ka furmay Maansoor Hotel Hargeysa – WARSOOR
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo ka qaybgalay Shirweynaha garabka dhalinyarada Xisbiga Kulmiye oo ka furmay Maansoor Hotel Hargeysa
Hargeysa – (warsoor) – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ayaa maanta oo Axad ah si rasmi ah u furay shirweynaha garabka dhalinyaradda ee xisbiga KULMIYE, oo ka qabsoomay huteel Maansoor ee magaaladda Hargeysa.
Madaxweynaha oo khudbad miisan leh ka jeediyey madashaasi qiimaha badan ayaa yidhi “Mas’uuliyiinta Qaranka, Madaxda Xisbiga Kulmiye, Mudanka Dhallinyarta, iyo Marti-sharafta Milgaha leh ee isugu timi Madashan, dhammaantiin Nabad-galyo iyo Naxariis Eebe korkiina ha ahaato (Asalaamu Calaykum, Wa-raxmatulaahi Wa-barakaatu).
Milgo iyo Maamuus weyn bay ii tahay, inaan ka soo qayb-galo Shirweynahan Dhallinyarada Xisbiga Kulmiye, ee ka kala yimi Gobollada Jamhuuriyadda Somaliland.
Waxa hubaal ah, in Dhallinyarada Dalka ee aad ka midka tihiin, ay yihiin labeenta, laxaadka, iyo laf-dhabarta uu ku faanayo qarankan yagleesha ah, ee loo soo daadiyey dhiigga iyo dhididka faraha badan.
Ummad aan da’yar lahayn, waxay ka dhigan-tahay beer aan baad iyo biyo toonna lahayn.
Haddaba, aniga oo ka faa’iidaysanaya munaasibaddan, waxaan jecelahay in aan halkan hambalyo hawada u mariyo, dhammaan Dhallinyarada Jamhuuriyadda Somaliland, dedaalka, iyo doorka ay kaga jiraan dib-u-dhiska dalka, adkaynta nabadgelyada, fidinta aqoonta, kobcinta dhaqaalaha dalka, taaba-gelinta iyo difaaca qarannimada.
Adeerayaal iyo awoowayaal, halkaa ka sii wada dedaalka, isku-duubnida iyo ilaalinta danaha guud ee dalkeenna.
Waxaan idin leeyahay, wixii tagay tiigsimaad ma leh, ee waxa tallo iyo tacab inooga baahan maanta iyo berito.
Kulmiye wuxuu ahaa, ururkii ugu da’da yaraa, uguna danbeeyey toddobadii urur ee la diiwaan-galiyey, isla sannad-kaana wuxuu ku guulaystay kaalinta labaad ee tartankii doorashooyinkii Dawladaha Hoose.
Xisbiga Kulmiye, oo ah maanta Xisbul Xaakim, wuxuu talada Dalkan ee uu hantay u soo maray jid dheer oo uu sahay uga soo dhigtay sabir, dulqaad, tanaasul, tudhaale, tallo wadaag iyo tawfiiq.
Siyaasaddaa suuban ee bisaylka badan lihi, waxay raadaysay aqlabiyadda bulshada Somaliland, gaar ahaan, Dhallinyarada iyo Haweenka oo ahaa taageerayaashii ugu badnaa, ee horseeday guushii Xisbiga Kulmiye talada dalka ku haaneeday.
Mar labaad, waxaan jecelahay, inaan si balaadhan ugu mahad-celiyo dhallinyaradii muddada dheer i taageeraysay, isla-markaana Xisbiga Kulmiye barbar-taagnayd.
Murti-soomaaliyeed ayaa tidhaahda, “Ninka iyo Jiilaalku way is-hayaan, Waxaase Adkaada Hadba Kii ay Haweenaydu Raacdo”
Waxaan leeyahay Haweenka iyo Dhallinyaradu waa Bardaanka iyo Bud-dhigga Siyaasadda Somaliland. Sidaa darteed, ragga hoggaaminta talada dalka ku hirdamaya, hadba kii bursada ama ay raacaan ayaa reerka u hadha.
Duco-qabayaal, Waxaa hubaal ah, in aynu xaqiijinay hadafkii iyo himilooyinkii Xisbiga Kulmiye.
Waxa hubaal ah, in Xukuumadda Xisbiga Kulmiye ay taaba-galisay horumar balaadhan, iyo is-beddel la taaban karo.
Adeerayaal iyo Awoowayaal, Waxaan idin leeyahay, taageeradiinii Xisbiga Kulmiye, ma noqon tacab khasaar, ee waa lagu tanaaday. Waxaan idin leeyahay, taas baa guul idiin ah, dhammaanteena guul inoo ah.
In kasta oo ay Xukuumadda Xisbiga Kulmiye wax-weyn qabatay, hadana waxa dhab ah inaan muddo xileed keliya wax walba lagu xaqiijin karin.
Haddaba, si aynu halkaa uga sii ambaqaadno wax-qabadka iyo horumarka aynu seeska u dhignay, waxaan dhammaan taageerayaasha Xisbiga Kulmiye, gaar ahaan dhallinyarada, ugu baaqayaa inay si buuxda isu-garaB-taagaan Musharixiinta Xisbiga Kulmiye ee Doorashada Madaxtooyada.
Waxaan u arkaa, Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo Mudane, Cabdiraxmaan Ismaaciil Cabdillaahi, in ay yihiin hoggaamiyayaal ku munaasib ah, in ay halkaa ka sii wadaan hamigaygii siyaasadeed iyo himilooyinkii Xisbiga Kulmiye uu ku doojin lahaa dalkan.
Ugu dambayn, waxa maanta dalka ka jira abaaro ba’an oo u baahan in bulshadeenu si weyn isugu gurmato.
Xukuumad ahaan, waxaanu wadnaa dedaalo badan oo lagu taageerayo dadka abaartu tabaalaysay, waxaana loo baahan-yahay, in dhammaanteen aynu ka qay-qaadanno taakulaynta dadka iyo duunyadaba.
ILAAHAY Subxaanahu Wa-tacaalaa, Abaarta wuu inaga jabin doonaa, isla markaana idam Eebe waynu ka doogi doonnaa.
Dhinaca kale, waxaan caddaynayaa in Xukuumadda Xisbiga Kulmiye, aanay wadin wax muddo kordhin ah, insha Allaahu, Doorashaduna waxay dhici doontaa xilligii loogu talo-galay.
Halkan ka daawo qudbadda madaxweynaha:
Weftigii WADDANI ee Nayroobi oo Abaaraha Somaliland Awgeed Ka Cudur Daartay Xaflad ay Jaaliyadda Somaliland ugu Samayn Lahayd Nayroobi